News - Sida loo nadiifiyo ukunta quruxda
Sidee loo nadiifiyaa ukunta quruxda
Ukunta qurxinta waa shey aan u wada isticmaalno isku qurxinta. Waxaa jira noocyo badan oo ukumo isku qurxin ah oo suuqa yaala, laakiin saameyntu waa isku mid. Ka dib markaad isticmaasho ukunta qurxinta, nadiifinta waa lama huraan. Ma taqaanaa sida loo nadiifiyo ukunta qurxinta? Maanta, waxaan ku soo bandhigi doonaa tallaabooyinka nadiifinta ee ukunta quruxda. Haddii aadan aqoon, fadlan fiiri.
Tallaabada ugu horreysa: Ukunta quruxda hoos dhig biyaha qulqulka oo dhowr jeer ku dhufo si aad uga soo saarto dhammaan waxyaabaha wasakhda ah ee ku jira ukunta quruxda;
Talaabada 2aad: Ku jiido biyaha ukunta quruxda badh qallalan, ka dibna ku cadaadi xoogaa saabuunta saabuunta ama saabuun ah, ku cadaadi calaacasha gacantaada, ha qalloocin, haddii kale waxay dhaawici doontaa qaabka ukunta quruxda;
Tallaabada 3: Ugu dambayn, ku tuuji biyo socda hoostiisa adoo mayrinaya illaa aysan jirin xumbo. Haddii aad dareento inaysan nadiif ahayn, waad ku celin kartaa tillaabooyinka kor ku xusan. Dhammaan ukunta quruxda sidan ayaa lagu dhaqi karaa.
Waxaa ugu fiican in la beddelo ukunta quruxda labadii biloodba mar oo la mayro 2-3 jeer usbuucii. Waxaa ugu wanaagsan in aanad isticmaalin muddo aad u dheer, haddii kale waxay soo saari doontaa bakteeriya. Markaad nadiifinaysid, ukunta quruxda waxay lamid tahay barkinta hawada. Isku day inaadan aad u xoqin oo ha u isticmaalin cidiyahaaga inaad soo qaado. Tani waxay dhaawici doontaa dusha sare waxayna saameyn ku yeelan doontaa heerka u hoggaansamida marka la marinayo qurxinta. Haddii ukunta qurxinta aan la nadiifin karin, waxay si fudud u noqon doontaa caarya. Isticmaalka ukunta qurxinta noocan oo kale ah waxay sababi doontaa dhibaatooyin maqaarka waxayna saameyn ku yeelan doontaa caafimaadkeena.
Ukunta la isku qurxiyo waxay u baahan tahay in lagu keydiyo jawi qalalan oo hawo leh, sidaas darteed musqusha qoyan ee muddada dheer hubaal ah kuma haboona. Haddii ay tahay jawi qoyan oo xiran, ukunta qurxinta waxay u nugul yihiin caaryada oo gaabinaysaa nolosha adeegga.